DMF Right angled kupomba vharafu DMF-Z-50S, DC24 2/2 nzira DN50 2 padiki diaphragm vharafu
DMF Right angled kupomba vharafu DMF-Z-50S, 2/2 nzira DN50 2 padiki diaphragm vharafu 1. Right angled diaphragm vharafu hurongwa uchinyanya springless pisitoni / diaphragm magadzirirwo inopa soro yepamusoro kufurirwa uye zvakanakisisa kuerera waivako anodawo zvinhu zvaidiwa guruva nomuteresi zvikumbiro. 2. yepamusoro diaphragm anovimbisa refu uchishandisa upenyu uye hombe tembiricha siyana. 3. Possible kushandisa uwandu hwakasiyana-siyana kuti namo madaro uye kusvika 24 mavharuvhu. 4. Mumwe kubatanidza vamwe tangi nehurongwa ....
DMF Right angled kupomba vharafu DMF-Z-50S, 2/2 nzira DN50 2 padiki diaphragm vharafu
1. Right angled diaphragm vharafu hurongwa uchinyanya springless pisitoni / diaphragm magadzirirwo inopa soro yepamusoro kufurirwa uye zvakanakisisa kuerera waivako anodawo zvinhu zvaidiwa guruva nomuteresi zvikumbiro.
2. yepamusoro diaphragm anovimbisa refu uchishandisa upenyu uye hombe tembiricha siyana.
3. Possible kushandisa uwandu hwakasiyana-siyana kuti namo madaro uye kusvika 24 mavharuvhu.
4. Mumwe kubatanidza kune dzimwe tangi nehurongwa. Service kwokubatana nokuti zvakasiyana nenhumbi akadai: Sefa regulator, kumanikidzwa geji, kuchengeteka uye otomatiki / Chinyorwa Drain vharafu.
5. Several furidza mutopota kwokubatana iripo, akadai: anokurumidza kubhururuka, inotunga-mukati, hosipaipi kana Threaded kubatana.
Tank akatasva kupomba vharafu, DMF-Y-50S, DC24 kunyudza diaphragm vharafu
Material Body: chiwanikwa
Port Size: 1.5 padiki
Temperature eMedhiya: Medium Temperature
mhando Orifice Port Size hwidibiro KV / CV
DMF-Z-50S DC24V kupomba vharafu diaphragm Kits / Kamudzira
Good unhu kupinza diaphragm anofanira kusarudzwa uye kushandiswa ose mavharuvhu, nechikamu chimwe nechimwe ndakaongorora neimwe kugadzira nzira, uye aiswe gungano mutsetse maererano yose nzira. Ever rapera vharafu achabatwa kuvhuvhuta bvunzo.
Hwidibiro kugadzira Kits suit kuti DMF dzakatevedzana guruva nemuteresi diaphragm vharafu
Temperature Range: -40 - 120C (Nitrile zvinhu diaphragm uye chisimbiso), -29 - 232C (Viton zvinhu diaphragm uye chisimbiso)
Warranty: kupomba vharafu Our garandi iri 1.5 gore, mavharuvhu zvose anouya nezvinhu 1,5 gore vanowatengesa garandi, kana chinhu chakaremara muna 1,5 gore, We ichapa pakutsiva pasina mamwe mundiro (kusanganisira kutumirwa kubhadhara) pashure tichigamuchira chakaremara zvigadzirwa.
Previous: Guruva nemuteresi MM akatevedzana CA76MM RCA76MM NBR diaphragm goyen pneumatic tangi akatasva kufamba kweropa mavharuvhu
Hwidibiro Pulse mavharuvhu
Pinza Pipe Pulse Valve
Pneumatic Pulse mavharuvhu
Sbfec Pulse mavharuvhu
Danda vaungane kugadzira Kits uye 0200 solenoid DC2 ...